Free Forex VPS | Qiimaha Ganacsi Lacageed
Home / Bixinta lacagaha / Waxyaabaha Lacagta Sheega ee Forex / VPS lacag la'aan ah
At FXCC waxaan macaamiisheena siinaa awoodda iyo xarumaha ganacsiga adoo adeegsanaya adeegga VPS (server server private). Waxaa jira saddex faa'iido oo muhiim ah oo muhiim u ah isticmaalka VPS si loo horumariyo waxqabadka ganacsiga; xawaaraha, ammaanka iyo helitaanka. Halkan waa sheeko gaaban oo kooban.
FXCC waxay bixisaa VPS martigelinta habka kale ee la awoodi karo oo la maareeyn karo oo la xidhiidha xawaaraha isku xirka oo aad ugu dhow xawaaladaha ugu dhaqsaha badan ee codsiyada ganacsiga. Bixinta latency hoose oo si shakhsi ah u damaanad qaadaya isku-xirnaanta sicirka udhexeeya: brokers, naadiyada waawayn ee waaweyn iyo shabakadaha maaliyadeed sida ECX-yada FXCC, waxay keeneysaa in si weyn loo hagaajiyo fulinta amarka ganacsiga.
Haddi aad ganacsi ku iibsato MetaTrader, ama isticmaalka qalabka casriga ah iyo software-ka ganacsiga, amnigu waa arrin muhiim ah ee ganacsiga dalabka VPS. Waxaa jira guulo la taaban karo oo la taaban karo oo lagu hagaajinayo codsiyada software-ka ee nidaamka fog ee khaaska ah iyo qaababka 'Windows VPS Templates' si joogto ah ayaa loo cusbooneysiiyaa si loo ilaaliyo sirta iyo isticmaalaha labadaba kuwa soo weeraray iyo hanjabaado kale. Marka la eego qalabka jirka, daryeel weyn ayaa loo qaadaa si looga hortago guuldarooyinka waaweyn. Qaybaha martigeliyay iyo qaybaha shabakada ee muhiimka ah waxaa loola socdaa 24 / 7 wixii arrimo ah oo si xushmad leh loola shaqeeyo 24 / 7 iyadoo lala kaashanayo kooxaha farsamada gacanta.
In aad haysatid server-gaaga u gaarka ah si aad u maamusho codsiyadaada ganacsiga, waxay kaa caawisaa xaqiijinta socodka is-dhexgalka ee ganacsigaaga. Haddii, tusaale ahaan, aad boggaaga internetka ka sameysay, waxaad ku martiqaadi kartaa kombuyuutarka gurigaaga, si kastaba ha ahaatee, waxaa dhici karta in aad si dhakhso ah u xiriiriso farsamada gacanta fiber optic. Waxaad ku martiqaadi kartaa server-ka qaaska ah, oo ay macaamiishaadu ku amri karaan alaabtaada sida ugu dhakhsaha badan uguna wax ku oolka badan ee suurtogalka ah, sida ugu habboon ee suurtogalka ah iyo u geli kartaa suuqa afar iyo labaatanka saacadood maalintii. Suuqgaadu ma xirnaayo markaad damiso kombuyutarka gurigaaga iyo fiidiyaha ballaadhan habeenkii. Waa xaalad la mid ah helitaanka helitaanka marka ganacsiga; haddii ay ku shaqeeyaan barnaamijyo automated waxay u leeyihiin inay ganacsi 24-7, server / s had iyo jeer u baahan tahay in la soo-koobo oo loo go'aamiyo adeeggaaga gaarka ah, ganacsiga.
Qalabka iyo nidaamyada waxaa guud ahaan lagu dhejiyaa adeegga guud ee VPS, sida isticmaalka Fudud (Remote Desktop Access) kaas oo u oggolaanaya dadka isticmaala inay si fudud ugu xirmaan serverkooda gaarka ah - VPS meel kasta, iyada oo aan lahayn qalab dheeraad ah, ama qaabeynta loo baahan yahay. Ganacsadayaashu waxay ka heli karaan qalab ganacsi oo ka socda qalab kala duwan: kombiyuutarada, laptops, kiniiniyo, iyo casriga, iyada oo aan wax kala qabin software ku socota VPS. Isticmaalka isticmaalka VPS kala-duwan iyo xisaabaadyo badan ayaa lagu dhigi karaa isla VPS, siinta u-helitaanka isticmaalaha, si loogu oggolaado in badan oo isticmaala si ay u eegaan shaxda si siman, ayaa laga yaabaa in la maamulo, laga bilaabo goobo gaar ah.
Si aad u dalbato VPS bilaashka ah, si fudud u gal macaamiisha Hubka, akhri Shuruudaha & oo codso codkaaga.
Hel VPS our